TSMC ayaa buuxinaysa mahadsanid Apple | waxaan ka imid mac
Wabi la rujiyay, faa'iido kalluumaysato. Taasi waa hal-ku-dhegga loo baahan yahay in uu ahaado gidaarka xarunta-chipmaker-ka. TSMC. Iyadoo guud ahaan webigu uu adduunka oo dhan ka da'ayo yaraanta chips, qaar ka mid ah kalluumaysatada waaweyn, sida TSMC, ayaa isu beddelaya dahab.
Soo saaraha Tani ee Processor sida muhiim ah sida Taxanaha Apple A iyo M, ayaa hadda daabacday qaar ka mid ah tirooyinka iibka sannadkii hore, runtuna waxay tahay in tirooyinka ay muujinayaan faa'iido cajiib ah. Waxaan qiyaasayaa in madaxda Apple ay heli doonaan dufcad wanaagsan Christmas-ka Taiwan….
Soo saaraha caanka ah ee processor-rada TSMC ayaa daabacday qaar ka mid ah xisaabaadka xisaabaadka ee sanad maaliyadeedka 2020 runtuna waxay tahay in ay yihiin kuwo cajiib ah, iyada oo la tixgelinayo dhibaatooyinka aan ku hayno adduunka oo dhan sababtoo ah la'aanta qalabka chips iyo processor-yada.
Shirkadda ayaa sheegtay in ay kor u kacday dakhliga soo gala 24,1% sanadka 2021 marka loo eego sanadkii hore. Oo maskaxda ku hay in rubuc ka mid ah dakhligaas ay soo saartay Apple. Muddada gaaban, tani shaki la'aan waa war weyn, laakiin khatar ku ah muddada dhexe iyo muddada dheer. 25% ka mid ah wareejinta TSMC waxa qaada hal macmiil: Apple.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., marka laga reebo warbixinta dakhliga, ayaa sidoo kale daabacday in ay diiwaangelisay koror ku yimid 16,4% dakhliga rubuci afraad ee sannadkii hore. Tirooyinkan, shirkaddu waxay kor u qaadday saadaasha kobaca dakhliga taasoo hadda dhigtay inta u dhaxaysa 15 iyo 20 boqolkiiba.
TSMC waxay durba bilowday tijaabooyin si ay u bilaabaan soo saarista tiro badan oo cusub 3nm processor, taas oo Apple ay u sugayso sida May biyaha iPhones, iPads iyo Macs ee 2023. Shaki la'aan, shaqada wanaagsan ee TSMC ay u qabanayso sannadahan Apple, hadda waa mid waxtar leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » TSMC waxay samaynaysaa hanti aad u wanaagsan Apple
Mactracker waa la cusboonaysiiyay isagoo ku daraya MacBookga cusub iyo hagaajinta